musha EUROPEAN FOOTBALL STORies Vatambi vechiGerman Vanotamba Joel Matip Utano Nhau Plus Untold Biography Facts
LB inopa Nyaya Yese yeBlack Genius iyo inonyatsozivikanwa nezita rezita rezita; "Jimmy". Nhoroondo Yedu Joeri Matip Childhood Indaba pamwe Untold Biography Facts inounza kwauri nhoroondo yakazara yezviitiko zvinoshamisa kubva paudiki hwake nguva kusvika zvino. Kuongorora kunosanganisira hupenyu hwake hwepakutanga, mhuri yemhuri, nyaya yehupenyu pamberi pezita, kusimudzirwa mukurumbira nyaya, ukama uye hupenyu hwehupenyu.
Hongu, munhu wose anoziva nezvehukuru hwake 6 '5' urefu. Zvisinei, vashomanana chete vanofunga nezveJoel Matip's Biography iyo inonakidza chaizvo. Iye zvino pasina kunze kwekudaro, ngatitangei.
Joel Matip Utano Nhau Plus Untold Biography Facts- Upenyu Hwokutanga & Mhuri Yacho
Kutanga, mazita ake chaiwo ndiJobho Joël André Matip. Joel Matip sezvaanowanzonzi akadanwa akaberekwa pa 8th musi waAugust 1991 kuna amai vake, Eva-Maria Matip uye baba, Jean Matip muBochum, Germany. Pasi pane mufananidzo wevabereki vake vanodiwa naJoel Matip panguva iyo vakatsigira mwanakomana wavo panguva ye2014 FIFA WorldCup.
Joel Matip Vabereki- Amai, Eva-Maria uye Baba, Jean Matip. Chikwereti Waz.
Kutonga nemaonero avo, unobvumirana kuti Joel akaberekwa hafu yakaiswa. Waizviziva here? Akaberekerwa nemumwe muCamerbia uye mumwe muGermany uyo angave ane maAsia anotarisa.
Joel Matip anobva kune vanhu vanozvininipisa pakati pemhuri. Mukadzi wake, Eva-Maria, ndiye nyanzvi yepamusoro mukuchengetedza kwekuora mwoyo. Akazvitsaurira hupenyu hwake nekushanda nevarwere vanorasikirwa nekurangarira. Mukadzi waJoel Matip anoshandawo kuGermany Red Cross.
Waizviziva here? Baba vaJoel Matip, Jean aimbova mudzidzisi wemakemikari asati atanga kupinda mubhokisi munyika yeCameroon. Akauya kuGermany kubva kuCameroon ane digiti yemakemikari. Vabereki vaJoel Matip Jean naEva-Maria vakasangana apo baba vake Jean vaipfuurira mberi zvidzidzo zvake ku yunivhesiti muBochum. Vakawira murudo, vakasimbisa ukama hwavo, vakaroora uye vakaberekera Joel.
Joel Matip akakurira nehanzvadzi yake, Rebecca uyo akazova dermatologist akabudirira muGelsenkirchen. Iye anewo mukoma mukuru anonzi Marvin Matip uyo ariwo mutambi wenhabvu.
Joel Matip Utano Nhau Plus Untold Biography Facts- Basa Rokutanga Upenyu
Zvakanga zvakaoma kuna baba vaJoel Matip Jean kuti vatarise kubvisa kwake kubva kubhola. Uyu aimbova muKamerican footballer akaronga chirongwa chekuramba achirarama hope yavo kuburikidza nevanakomana vake Mavin naJoel.
Kuva nemutambo wekare-sebaba, zvinongoitika zvekuti mutambo upiwe muJoeri kunyange paaipinda chikoro cheGesamtschule Berger Feld. Chido chake chemukona chakamuona achizonyora chikamu chechikamu ne SC Weitmar 45 mugore re1995.
Haana kutora nguva yakareba Joeri muduku kuti atange kuisa pfungwa nekambani. Smiley Joeri akafananidzirwa pasi apa akakwira pamakwikwi nokukurumidza sezvaaishungurudza vatambi vakwegura kupfuura iye.
Joel Matip Childhood Photo. Chikwereti IFC Globe
Joel Matip Utano Nhau Plus Untold Biography Facts- Simuka Mukurumbira
Kubwinya kweJoel kwakamupa nzvimbo munzvimbo yekambani yekumusha kwake, VfL Bochum. Zvinowanzoitika kune vose vaduku vechiGermany footballer kurota guru uye Joel Matip akanga asiri oga. Kutsunga kwake kutamba pachikwata chikuru chechiGermany vechidiki chakanga chisati chaenda sechinhu chinoshamisa.
Pazera re 9 mugore ra 2000, Matip akazonyora naSchalke mushure mokuedzwa kwakabudirira. Sezvo Matip akaramba achikura, akazviona achigadzirisa hupenyu hupenyu neChikami, achiita kunonatsa kufambira mberi kuburikidza nemapoka emakore uye mumutambo mukuru.
Chikwata cheMatip muGermany pamusoro pechikepe chakamuona achiendesa murume weMatch performance neBayern Munich musi waNovember 7, 2009. Kutarisa kubva kune iyo inonakidza kubudirira nechinangwa akamuona achiva wekutanga kufara nekambani.
Joel Matip anobatana naSchalke 04. Chikwereti kuna UEFA
Matip akapfuurira kushandisa makore manomwe nemakwikwi anoita 194 kuonekwa. Mutsara wekutsvaga wakakonzera Liverpool kugamuchira kwauya apo Matip akarova dare reDortmund Jurgen Klopp mune 2011 / 2012 DFL Supercup yekupedzisira.
Joel Matip achipemberera DFL Supercup nevadzidzi vake. Chikwereti kuna Faz
Apo chibvumirano chake naSchalke chakapera muzhizha re 2016, Jurgen Klopp akanga ari pakati pemamiriyoni avo vakarwa nokuda kwekunyora kwake. Kuonga kwenguva yekare nekuda, muJalimane muJamerican akasarudza kubatana nemutungamiriri wepambano muLiverpool.
Sezvakaita panguva yekunyora, Liverpool centre-kumashure yakange yakakwirira uye ine simba mukushamwaridzana kwayo van Dijk uye Dejan Lovern. Vamwe vose, sezvavanotaura nhoroondo.
Joel Matip Utano Nhau Plus Untold Biography Facts- Ukama Hupenyu
Pasi pemunhu wese mukuru, pane nguva dzose mukadzi, saka shoko rinowedzera. Uye mushure mokunge anenge muteereri wese kubva kuAfrica midzi, pane chokwadi chakanaka WAG mumunhu waLarissa.
Joel Matip uye His Girlfriend, Larissa. Chikwereti Mufananidzo: Imgur neWTFoot
Larissa angangodaro anonyanya kunzwisisika WAG nokuti hapana anoziva chinhu pamusoro pake kunze kwekuti iye ari kufambidzana Matip uye anoda kumurinda achiita.
Joel Matip Utano Nhau Plus Untold Biography Facts- Upenyu hwehupenyu
Kuziva hupenyu hweJoel Matip huchakubatsira kuti uwane mufananidzo wakazara wake. Joeri anoshamisa, akasika, anozvivimba, ane simba uye asingadzivisiki. Iye anokwanisa kuita chero chaanoda mune chero chinzvimbo chehupenyu anozviisa kwaari.
Joel Matip ane shamwari dzakawanda nokuti vane rupo uye vakavimbika saiye. Kunakidza kwake kwakanaka kunoita kuti kubatana nevamwe vanhu zvive nyore. Muenzaniso unoratidzwa muvhidhiyo yake ne Daniel Sturridge.
Joel Matip Utano Nhau Plus Untold Biography Facts- Upenyu hweMhuri
Waizviziva here? Pakave nechimwe chinhu chinonzi cerebral, kunyange chirwere, pamusoro peJoel Matip kudzivirira. Zvichida izvi hazvishamisi kuti mishonga nebhokisi ndeyemhuri yake.
Joel Matip mhuri ndeimwe yemhuri yakabudirira zvikuru yeGermany kubva kuMamerbia midzi. Kutenda kumusoro wemhuri Jean Matip, mhuri yeMatip yakagadzira nhoroondo mukugadzira mudzidzisi wekutanga webhokisi wekuda munyika yavo, Bochum. Jean Matip, aimbova mudzidzisi wemakemikari (chinoratidzwa pasi apa nemhuri yake) akazova mutambi uye gare gare mutungamiri weC FC Italia muB
Joel Matip Mhuri Mufananidzo, baba vake (kuruboshwe), mukoma wake Marvin (kuruboshwe kuruboshwe). Chikwereti WTFoot
Mukuru weJoel Matip, Marvin Matip ane makore 6 akakura kupfuura iye. Kungofanana naJoel, Marvinwo akamirawo neZveshumba Zvisingadikanwi zveCameroon. Kubva pachikwata chekambani, akachiita mutungamiri weboka re FC Ingolstadt, kambani yeGerman muBundesliga 2.
Maererano nenhepfenyuro, rutivi rwaamai vaMatip vane mamwe mamhuri avo vakadzidza mushonga. Semuenzaniso, sekuru vaJoel Matip nemukoma wake Martin ndivo vanachiremba.
Kusiyana nekutengeserana kwezvokurapa, mhuri yaJoel Matip kubva kudivi rababa vake ine midzi yakasimba yebhola. Iye ihanzvadzi ainzi Joseph-Desire Job uyo aive ne 52 Cameroon akanganisa pakati pe1998 ne2011.
Joel Matip Upenyu Hwemhuri-Pamusoro peCousin wake. Chikwereti thefinalball.com
Joel Matip Utano Nhau Plus Untold Biography Facts- LifeStyle
Kusiyana nedzimwe hama dzake dzinobva kuAfrica midzi, inofanirwa naObafemi Matins, Mario Balotelli, Adebayor, etc ... Matip haisi iyo mutambi wenhabvu anogara muLavish Lifestyle iyo inonzwisisika zviri nyore nemaoko mashomanana anofadza chaizvo, swag, vasikana, etc. Anonyatsonakidzwa nemotokari yake yeMercedes.
Joel Matip Motokari. Chikwereti kuWTFoot
Joel Matip Utano Nhau Plus Untold Biography Facts- Untold Facts
Ukama naRigobert Song:
Joel Matip naRigobert Song Relationship. Chikwereti Sporting Heroes uye WorldFootball
Panguva yekusaina kwake kuLiverpool, Joel Matip akazova wechipiri muCameroon kuti aite zveReds mushure mekuda kwake nyika, Rigobert Song.
Kushamisika Kuparara Kwemari Yake:
Joel Matip Mitsutso. Chikwereti kuWTFoot
Muna July 2016, Joel Matip akasayina chibvumirano neLiverpool iyo iyo yakagumburwa, inomuwana € 10,383 (£ 9,347) pazuva, € 433 (£ 389) neawa uye £ 0.11 yese yechipiri. Izvi zvinofanirwa kumhanya kwemakore 5. Fungidzira kana uri iwe unowana izvozvi uye zvauchazoita nemari yakadaro!? ...
CHOKWADI CHINOGONA: Kuvonga nekuverenga Joeri Matip Childhood Indaba pamwe neSepold Biography Facts. At LifeBogger, isu tinoedza kururamisira uye kusaruramisira. Kana ukawana chimwe chinhu chisingatarisi zvakanaka, tapota shandisa nesu nekupindura pasi apa. Tichagara tichikoshesa uye tichiremekedza pfungwa dzako.
Loris Karius Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts